အကျိုးအတွက်ပူဇော်နေစဉ် — Steemit
gold-bloger (36)in #esteem •3years ago
သငျသညျထကျ 2016 ခုနှစ်တွင် $ 2,550 ကနေ 2017 တစ်ခု FSA ၌ရှိသကဲ့သို့အများကြီးအဖြစ် $ 2,600 ထားနိုင်ပြီး, သင်သည်သင်၏ပံ့ပိုးမှုများကိုမဝင်ငွေအခွန်ကြွေး။ $ 1,306 ပျမ်းမျှနှစ်စဉ်အလှူငွေနှင့်တကွ, မာစစ်တမ်းကိုသင် 25% အခွန် bracket က၌ရှိကြ၏လျှင်သင်အခွန်အတွက် $ 327 ကိုကယ်တင်မယ်လို့တွေ့။ သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်ယခုနှစ်အစပိုင်းမှာတစ်ခုလုံးကိုအစီအစဉ်ကိုယခုနှစ်များအတွက်ရန်ပုံငွေရရှိနိုင်စေရမည်ဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏လစာမှနုတ်ဖို့ဘယ်လောက်သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်အားပြောပြီးတာနဲ့သင်ကငွေရှိသမျှကိုသင့်အကောင့်ထဲမှာဖွင့်ပြတော်မူပြီရှေ့တော်၌ထို FSA ရန်ပုံငွေများဖြုန်းစတင်နိုင်ပါသည်။ အားလုံးသင့်ငွေဟုဆိုကာများအတွက်အကောင်းဆုံးမဟာဗျူဟာ အဆိုပါအသိပေးချက်ကိုသင်ယေဘုယျအားဖြင့်အစီအစဉ်ကိုတစ်နှစ်အတွင်းသင့်ရဲ့ FSA အတွက်ပိုက်ဆံဖြုန်းခြင်းသို့မဟုတ်ရန်ပုံငွေများ-တစ်ခု FSA ဒေါ်လာ $ 52 ပျမ်းမျှမာသည်နှင့်အညီ, unspent go ဆုံးရှုံးဖို့ရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျကျူးလွန်ပြီးတာနဲ့, သင်သည်သင်၏အလုပ်အကိုင်သို့မဟုတ်မိသားစု status ကိုအပြောင်းအလဲများကိုမဟုတ်လျှင်လုပ်ခလစာဖြတ်
3 years ago in #esteem by gold-bloger (36)
Congratulations @gold-bloger! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :
Congratulations @gold-bloger! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :
Congratulations @gold-bloger! You receivedapersonal award!